YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, April 15
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/15/20090အကြံပြုခြင်း
14052004 NLD ကြေငြာချက်
Publish at Scribd or explore others: Books Brochures & Catalogs sale promotional
OKM & Others
OKM & Others malaymay
Publish at Scribd or explore others: Books Fiction people exam
မြန်မာကျူးပစ်က ကိုရွေမောင်းက ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ PDF လေးလုပ်ထားပေးလို့ ထပ်ပြီး Upload လုပ်ထားပါတယ်။
BY မလေးမေ ... 4/15/20093အကြံပြုခြင်း
Army Officer Request
မျိုးချစ် တပ်မတော်သားများကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
အနာဂါတ်သာယာပါစေသား . . .
လက်တဆုတ် အခွင့်အရေးသမား ဗိုလ်ချုပ်တစု ကျဆုံးပါစေသား . . .
မျိုးချစ် ကြည်း/ရေ/လေ တပ်မတော်သားကိုယ်စား -
ပြည်သူသာ အမိ၊ ပြည်သူသာ အဖ။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ မဟားစိုးကျွန်းတွင်ရခိုင်ရွာများ ရခိုင်ယဉ်ကျေးမူးမပျက်ဘုရားရီချိုးပွဲမှတ်တမ်းတင်ပုံများ။(၁၄-၄-၂ဝဝ၉)
၁။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းသည် ဇီးကုန်းမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိရွာများသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရွာသားများကိုငွေ ပေးစည်းရုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှုးချုပ်အောင်သိန်းလင်းသည် အများပြည်သူထံမှ ကောက်ခံထားသည့် ရန် ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်ငွေကြေးများဖြင့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကဖွဲ့စည်းယှဉ်ပြိုင်မည့်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရန်အကြိုမဲဆွယ်ပွဲများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။
၃။ တပ်မတော်စာရင်းစစ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင်သည်၊ဗန်းမော်မြို့၊ဖိုးဒေ၀ကျေးရွာသားများကို ငွေနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေး၍မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
၄။ အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းသည်လည်း ပြည်သူများ၊ လူမှုရေးအသင်း အဖွဲ့များ ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းကာ စည်းရုံးလျှက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
၅။ ထို့အပြင် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရသည်၎င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ညွှန်ကြား ထားကြောင်းနှင့်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် ၄င်းတို့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများကိုပင် ကြိုတင်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
၆။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရသည် ၂၀၁၀တွင်ပါတီစုံအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်ဟု ကြိုတင်ကြေငြာထားသော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း သည် ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပေ။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ ဥပဒေ အမှတ်-၁၄/၉၈၊အခန်း(၁၂)ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ ခေါင်းစဉ်ပါ ပုဒ်မ-၄၉ (က) ပြဌာန်း ချက်ပါ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် yk*~dKလ်တဦး၏ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်နှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်တို့ကိုကျင့် သုံးခြင်းမပြုနိုင်စေရန်အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊မလျော်သြဇာသုံးခြင်း၊လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊လာဘ် ပေးခြင်း(သို့မဟုတ်)လာဘ်ယူခြင်းတို့ကိုမည်သူမျှမပြုရဟု အတိအလင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း-၉ က။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများခေါင်းစဉ်ပါ ပုဒ်မ-၁၇၁(ခ) လာဘ် ပေးခြင်း/လာဘ်ယူခြင်း၊ ပုဒ်မ-၁၇၁(ဂ) ရွေးကောက်ပွဲ၌မလျော်သြဇာသုံးခြင်းစသည့် ပြစ်မှုများအတွက် ပုဒ်မ-၁၇၁(င)နှင့်ပုဒ်မ-၁၇၁(စ)တို့တွင်(၁)နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေချမှတ်ရမည်ဟု အတိအလင်းပြဌာန်းပါရှိသည်။
မျက်မှောက်ကာလတွင်အာဏာပိုင်များ(သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသူများသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုမပြဌာန်းရသေးမီကပင် အထက်ဖေါ်ပြပါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်နေကြသည်မှာတိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်-တရားလက်မဲ့ပြုကျင့် မှုများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေသည်။
ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များ ကိုယ်တိုင်တရားလက်မဲ့ပြုကျင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ၏ အဆုံး သတ်ရာလမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုအပေါ်တွင်သာမူတည်နေပါသည်။
-နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် တရား လက်မဲ့ပြုကျင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်နေခြင်းသည် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ရပ်တန်းကရပ်သင့် ကြောင်း၊
-အာဏာပိုင်များ၏တရားလက်မဲ့ ပြုကျင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာ၊ ဖေါ် ထုတ်၊တွန်းလှန်ကြရမည့်တာဝန်သည်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုအပေါ်သို့အစဉ်သဖြင့်ကျရောက် လျက်ရှိပါ ကြောင်း တို့ကို ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
နေ့စွဲ - ဧပြီလ(၁၀) ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
အသေးစိတ်သိလိုပါလျှင် ဆက်သွယ်ရန် ဦးမျိုး (086216 0108) တာဝန်ခံ ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့
Publish at Scribd or explore others: Books How-to-Guides & Manu research legal
Publish at Scribd or explore others: Books myanmar aung blala
အလွန် ထက်မြက် ထင်ရှားသော အိမ်ရှေ့မင်း နှစ်ပါး ဖြစ်သော်လည်း ကံအကျိုးပေး မလှ၍ ထီးစံ နန်းစံ ဘုရင် မဖြစ်ခဲ့ရဘဲ အိမ်ရှေ့မင်း ဘဝနှင့်ပင် နတ်ရွာ လားခဲ့ကြရတဲ့ "ရွှေတောင်မင်းနှင့် ကနောင်မင်း" တို့ အကြောင်းကို ၂ဝဝ၈၊ နိုဝင်ဘာမှာ မြန်မာ့ ရတနာ စာပေက ပထမ အကြိမ် ပုံနှိပ် ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ မကြန်ရဲ့ 'သမိုင်းဟူသည်နှင့် အခြားစာတမ်းများ' စာအုပ်မှနေ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် ပဒေသရာဇ်ခေတ်တွင် ဘုရင်မင်းမြတ် ယုံမှတ် သဒ္ဓါ တော်မူသော သားတော် မြေးတော် ညီတော်များ အိမ်ရှေ့ အဖြစ် ချီးမြှောက် ခန့်ထားခံရသည်။ အိမ်ရှေ့မင်း ဖြစ်လျှင် နန်းလောင်း နန်းလျာ နန်းရန် ဖြစ်၍ ထီးနန်း အရိုက်အရာကို ဆက်ခံရမည်မှာ မသွေမုချဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထီးနန်း ဆက်ခံမည်သူဟု သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သည်။ သမိုင်းစဉ် တလျှောက် အိမ်ရှေ့မင်းသားတိုင်း လိုလိုပင် ထီးနန်း ဆက်ခံ စိုးစံရသည်။ သို့သော် မမြင်ရသော ကံတရား ဆိုသည်က ရှိသေးသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထင်ရှားသော လူစွမ်း ဓားစွမ်း ထက်သော အိမ်ရှေ့မင်း နှစ်ပါး ရှိသည်။ အလွန် ထက်မြက် ထင်ရှားသော အိမ်ရှေ့မင်း နှစ်ပါး ဖြစ်သော်လည်း ကံအကျိုးပေး မလှ၍ ထီးစံ နန်းစံ ဘုရင် မဖြစ်ခဲ့ရ။ အိမ်ရှေ့မင်း ဘဝနှင့်ပင် နတ်ရွာ လားကြသည်။ ထိုအိမ်ရှေ့မင်း နှစ်ပါးသည် ရွှေတောင်မင်းနှင့် ကနောင်မင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ရွှေတောင်မင်းသည် ဗဒုံမင်း၏ သားတော်ကြီး ဖြစ်သည်။ မြောက်နန်း မိဖုရား သီရိမဟာစန္ဒဒေဝီမှ ၁၁၂၄ နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက် တနင်္လာနေ့ ဖွားမြင်သည်။ ရွှေတောင်မင်း သတိုးဓမ္မရာဇာဟု ထင်ရှားသည်။ ငယ်မည်က မောင်ပေါ်ဟု ရခိုင် ရာဇဝင်တွင် တွေ့ရသည်။
ဗဒုံမင်းသည် သားတော်ကြီး ရွှေတောင်မင်းကို အလွန်မြတ်နိုး အားကိုးတော် မူသည်။ အသက် ၂ဝ အရွယ် ၁ဝ ဇူလိုင် ၁၇၈၃ ကြာသပတေးနေ့တွင် မိဖုရားခေါင်ကြီး၏ သမီးတော်လတ် တောင်တွင်းကြီး မြို့စား မင်းသမီး သီရိမဟာတိလောက ရတနာဒေဝီနှင့် ရေသွန်း လက်ထပ်၍ အိမ်ရှေ့မင်းအရာ အပ်နှင်းခံရသည်။
အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ သတိုးဓမ္မရာဇာ ရွှေတောင်မင်းသည် မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသာ ရခိုင်ပြည်ကို ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် စစ်ကြောင်း လေးကြောင်း ချီ၍ သွားရောက် သိမ်းပိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တဆက် တစပ်တည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ခမည်းတော် ဗဒုံမင်း၏ လက်ရုံးတဆူ၊ အားကိုး အားထားပြုရသော သားကြီး ဥပရာဇာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် အစွန်အဖျား ဝေးရပ် နိုင်ငံခြားသို့ စစ်ချီရာတွင်လည်း ဦးဆောင် ခေါင်းရွက် အဖြစ် လိုက်ပါရသည်။ ခမည်းတော် ဗဒုံမင်းကြီး မင်းကွန်း စံနန်းတော်တွင် ထွက်စံ နေချိန်များတွင်လည်း နေပြည်တော် အုပ်ချုပ်ရေးကို တာဝန် ယူရသည်။
သစ္စာဖောက်ခြင်းသည် စစ်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း တရပ် ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ ထားဝယ်မြို့ဝန် မြင်စိုင်းစား နေမျိုးကျော်ထင် သစ္စာဖောက်၍ တဖက်မင်းထံ ခိုဝင်သွားသည်တွင် ဥပရာဇာ ရွှေတောင်မင်းသည် ထားဝယ်ကြောင်း စစ်ကို ဦးစီး ချီတက်ရသည်။ ရန်ကုန်တွင် စစ်ချ ရပ်နေစဉ် ရွှေတိဂုံ အရှေ့မြောက်ယွန်းတွင် ကြေးနီအုပ်ွ့ကပ်မိုး ရွှေဇရပ် တဆောင် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသည်။ သံဃာတော်များအားလည်း ပရိက္ခရာ အစုံ လှူသည်။
ရွှေတောင်မင်းသည် စစ်ရေးတွင် ပြတ်သားသည်။ အမှုတော်ကို ကောင်းစွာ မထမ်း ခိုကပ် ပေါ့လျော့သော တပ်မှူး ၁၃ ယောက်ကို ကွပ်မျက်စေသည်။ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးများက အင်အား လျော့မည်ကို ထောက်၍ ဝင်ရောက် အသနားခံ တောင်းပန် သော်လည်း မရ၊ အခြား အမှုကိုသာ ငါသည်းခံ နိုင်မည်၊ စစ်ရေးဖြစ်၍ သည်းမခံနိုင်ဟု မိန့်သည်။ စစ်ပွဲတွင် စစ်ချီတပ်များ အရေးမလှ သဖြင့် စစ်ရေးတွင် နှေးသင့်သည်ကို လျင်လျင်ဆောဆော လုပ်လျှင် မအောင်မြင် သကဲ့သို့ လျင်လျင်မြန်မြန် လုပ်သင့်သည်ကို ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေး လုပ်လျှင် မအောင်မြင်နိုင်။ မိုးလည်း ကျပြီ၊ အကြေ အောက်အရပ် ဖြစ်၍ စစ်တက် စစ်လမ်း ခက်သည်။ ရန်ကုန်တွင် မိုးခို၍ မိုးစဲ ပွင့်လင်းသည့် ကာလမှ လုပ်ကြံလျှင် လွယ်ကူမည်ဟု ဝန်ကြီး မဟာသူရ လျှောက်ထားသည်ကို လုံးဝ လက်မခံ။ ခမည်းတော်က စစ်ကာလကို ထောက်၍ ခန့်တော်မူသည် မဟုတ်၊ မုတ္တမ စသော ပြည်များကို ရန်သူတို့ နှောင့်ယှက်၍ ချီလာရခြင်း ဖြစ်သည်၊ လျင်လျင်ထက်ထက် မလုပ်ဘဲ မိုးခိုနေလျှင် ရန်သူတို့ အခြေအမြစ် ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြေအမြစ် ဖြစ်ချေက လုပ်ကြံရေး မခက်ပြီလောဟု မိန့်တော်မူ၍ ဆက်လက် ချီတက်စေသည်။
ထားဝယ် အရေး ပြီးပြေ အောင်မြင်ခဲ့ သဖြင့် ဗဒုံမင်းသည် သားကြီး ဥပရာဇာ ရွှေတောင်မင်းကို အလွန် အားရတော်မူသည်။ တိုင်းကြီး ပြည်ကြီး စော်ဘွား မြို့စား ရာကြီး ထူးကြီးများ ခန့်ထားရေးနှင့် တိုင်းရေ ပြည်ရေး သာသနာရေးများကို ငါကဲ့သို့ စီရင်စေဟု ဧကရာဇ်မင်းတို့၏ အလွန် ပေးခဲလှသော ဆုကို ပေးတော်မူသည်။
ဥပရာဇာ ရွှေတောင်မင်း၏ အိမ်ရှေ့ မိဖုရား (မောင်ဇင်၊ မောင်ခင်တို့၏ မယ်တော်) သည် ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၁၇၉၃ ခုတွင် နတ်ရွာစံသည်။ ရွှေတောင်မင်းသည်လည်း ၂၉ မတ် ၁၈ဝ၉ ခုနှစ်၊ သက်တော် ၄၆ နှစ် ၁ဝ လတွင် နတ်ရွာစံသည်။ အိမ်ရှေ့မင်း စည်းစိမ် ၂၆ နှစ် စံစား ခဲ့ရသည်။ မင်းအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိခဲ့ပေ။
ရွှေတောင်မင်းတွင် မိဖုရား ၄ ပါး၊ ကိုယ်လုပ်တော် ၁၅ ယောက် ရှိသည်။ သားတော် ၃ဝ၊ သမီးတော် ၂၆ ၊ စုစုပေါင်း ၅၆ ယောက် ရှိသည်။ ရွှေတောင်မင်းသည် မင်းအဖြစ်ကို မရရှိ ခဲ့သော်လည်း သားတော် ၂ ပါး ဖြစ်သော မောင်ဇင် (စစ်ကိုင်းမင်း) နှင့် မောင်ခင် (ရွှေဘိုမင်း) တို့သည် ထီးနန်း ဆက်ခံ စိုးစံ ခဲ့ကြရသည်။
ကနောင်မင်းသည် သာယာဝတီမင်း ခေါ် ရွှေဘိုမင်း (မောင်ခင်) ၏ သား ဖြစ်သည်။ မင်တုန်းမင်း (မောင်လွင်) ၏ ဖအေတူ မအေတူ ညီဖြစ်၏။ ငယ်မည်က မောင်ကောက် ဖြစ်၏ဟု မောင်သန်းဆွေ (ထားဝယ်) က ဆိုသည်။ နဂါးဗိုလ် ထိပ်တင်ထွေး၏ ရတနာသီခ မဟာရာဇဝင်တွင် ဖော်ပြသော တောင်ဆောင်တော်မှ မီးရှူးတော် ခန်းမသို့ ထွက်မည် စီစဉ်ဆဲ တောင်ဆောင်တော် ထက်၌ပင် ဖွားမြင်သောကြောင့် မောင်တောင်မင်းဟု ခမည်းတော် ရွှေဘိုမင်း ကိုယ်တိုင်က အမည် ပေးလိုက်သည် ဆိုသော အချက် မမှန်နိုင်ချေ။ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၁ ခုဖွား ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က သာယာဝတီ မင်းသား (ရွှေဘိုမင်း) သည် မင်းအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိသေး၊ သက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ (အေဒီ ၁၈၃၇) တွင်မှ ထီးနန်း စိုးစံရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကနောင်မင်းသား၏ အသက် ၁၈ နှစ် ရှိနေပေပြီ။ ရွှေနန်း တက်တော်မူပြီးမှ သားတော် သမီးတော် ဖွားတော်မမူဟု ကုန်ဘောင်ဆက်၊ တ၊ ၅၅ တွင် တွေ့ရသည်။
ကနောင်မြို့ကို စားကျေးရ၍ ကနောင်မင်းသား၊ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားဟု ထင်ရှား လူသိများသည်။ ကနောင်မင်း၏ စွမ်းရည်ကြောင့် နောင်တော် မင်းတုန်းမင်း ထီးနန်းရသည်။ ထိုကြောင့် မင်းတုန်းမင်းက ညီတော် ကနောင်မင်းသားကို အိမ်ရှေ့အရာ အပ်နှင်းသည်။
ကနောင်မင်းသည် ထက်မြက်သော အမြော်အမြင် ကြီးသော အိမ်ရှေ့မင်း ဖြစ်၏။ အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်လိုလျှင် သူတို့လို ခေတ်မီ လက်နက်များ ရှိရမည်ဟု မြင်သည်။ ထိုကြောင့် နေပြည်တော်တွင် စက်ရုံများ တည်ထောင်ရေးကို ကြိုးပမ်းသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်သည်။ နိုင်ငံခြား ပညာရှင်များကို ခေါ်ယူ အသုံးပြုသည်။ ခေတ်မီ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေးကို ရှေးရှုသည်။ အင်္ဂလိပ်များက သူ့ကို စစ်မင်းသားကြီး ကနောင် (Kanaung, War Prince) ဟု ကင်ပွန်းတပ်သည်။
သူ့ကို လာရောက် ဖူးတွေ့ရသော အင်္ဂလိပ် သံတမန်များက မင်းတုန်းမင်းနှင့် ရုပ်ချင်း ဆင်သော်လည်း အမူအရာ ကွဲသည်၊ ဇွဲရှိပုံ၊ စရိုက်ကြမ်းပုံ၊ ရမ္မက်ပြင်းပုံ ပေါ်သည်။ စိတ်ထက်သန်ပုံ အပြည့် မြင်ရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်သည်။ အိမ်ရှေ့ မိဖုရား လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်နှင့် ယှဉ်တွဲ မြင်ရသည်မှာ ရွှေမင်းသမီးနှင့် ဘီလူးပုံပြင် (Beauty and the Beast) ကို အမှတ်ရစေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ကနောင် မင်းသားသည် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များ အကြောင်း၊ ခေတ်အကြောင်း လေ့လာသည်။ မြန်မာဘုရင်များ ပြည်ပ လောကကို သတိမမူ၊ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာနနှင့် မိမိကိုယ် အထင်ကြီး နေသည် ဆိုကြသကဲ့သို့ မဟုတ်ကြောင်း သိလာသည်။ လာရောက် ဖူးတွေ့သော အင်္ဂလိပ် သံများကို - အင်္ဂလန် အလွန်အေးသလား၊ တရုတ်နိုင်ငံလိုပဲ အေးသလား၊ ရေခဲသလား၊ အင်္ဂလန်ထက် အေးသော နိုင်ငံတွေ ရှိသလား စသည်ဖြင့် မေးသည်။ ပြင်သစ်နှင့် အင်္ဂလန် ဘယ်လောက် ဝေးသည်ကိုလည်း သူသိချင်သည်။ ကုန်းလမ်း မရှိဘူးလား၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ် ဘယ်သူက စစ်အင်အား သာသလဲ၊ ဘယ်တိုင်းပြည်က စပြီး မီးသင်္ဘော လုပ်တတ်သလဲ စသည်ဖြင့်လည်း မေးသည်။ အင်္ဂလန်တွင် ကန့်ကို ဘယ်က ရသလဲ၊ ဘယ်လို အရည်ကျိုပြီး အမှုန့် အတောင့် လုပ်သလဲ၊ ဘာစက်ကရိယာတွေ သုံးသလဲ စသည်ဖြင့် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးသည်။ စစ်မင်းသားကြီး ကနောင် အကြံတော် ကြီးမားသည်ဟု အင်္ဂလိပ် သံတမန်များက မြင်သွား သိသွားကြသည်။
ကနောင် မင်းသားထံ ဝင်ထွက် ခံစားခွင့်ရသူ ကာတိုလိပ် ဘုန်းကြီး ဘီဂန်ဒက်လည်း ကနောင်မင်းကို ချီးကျူးသည်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ၊ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်တတ်သော၊ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာသောသူ ဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဥရောပ ဝိဇ္ဇာပညာ သိပ္ပံပညာတို့ဖြင့် ခေတ်မီ နိုင်ငံတော် ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း၏။ လူငယ်များကို ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ အိန္ဒိယတို့သို့ ပညာတော်သင် စေလွှတ်၏။ မင်းသား ကိုယ်တိုင် ပညာတတ်ကြီး တယောက် မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံတော် ခေတ်မီ တိုးတက်ရေး အတွက် ပြည်သူတို့ လူငယ်တို့ ပညာတတ်ရန် လိုသည်ဟု မြင်သည်၊ ခံယူသည်။ အိမ်ရှေ့အိမ်တော် လျောင်းတော်ဦးတွင် လူငယ် ၆ဝ ခန့် အလုပ်သိမ်းချိန် ညနေချမ်းတိုင်း စာပေ သင်ကြား လေ့လာ ကြရသည်။ မိန်းကလေးများ ပညာ တတ်မြောက်ရေးကိုလည်း အာရုံ ပြုမိသူ ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေး ၄ ယောက်ကို စရိတ် အလုံအလောက်နှင့် ရန်ကုန် ကွန်ဗင့်ကျောင်းသို့ ပို့၍ ပညာ သင်ကြားစေသည် စသည်ဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
ကနောင်မင်းသည် စစ်မင်းသားကြီး ကနောင် ဟူသော ဘွဲ့တပ် ခံရသော်လည်း သူ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ အရောက် မချီတက်နိုင်ခဲ့။ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် စစ်ရေး မပြိုင်ခဲ့ရ။ တူသမက်တော် မြင်ကွန်းမင်းသား၏ လက်ချက်ဖြင့် ၁၈၆၆ ခုနှစ်၊ သက်တော် ၄၆ နှစ် ၁ဝ လ တွင် နတ်ရွာ စံသွားသည်။
ကနောင် မင်းသားတွင် အိမ်ရှေ့ မိဖုရား လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်တွင် မြင်သော သားတော် ၂ ပါး၊ ကိုယ်လုပ်တော် ၅ဝ တွင် မြင်သည့် သားသမီးပေါင်း ၁ဝ၂၊ စုစုပေါင်း သား ၅၃၊ သမီး ၅၂။ မြေးယောက်ျား ၁၈၊ မြေးမိန်းမ ၂၁၊ သားသမီးမြေး ယောက်ျား မိန်းမ စုစုပေါင်း ၁၄၄ ရှိသည်။
ရွှေတောင်မင်းနှင့် ကနောင်မင်းတို့သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် စွမ်းရည်ထက်သော အိမ်ရှေ့မင်းသား နှစ်ပါး ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့စံ ဘဝနှင့်ပင် သက်တော် ၄၆ နှစ် ၁ဝ လတွင် နတ်ရွာ လားကြသည်မှာလည်း တိုက်ဆိုင် လွန်းလှသည်။ ထီးလျာ နန်းလျာ နန်းရန် မင်းသားများ ဖြစ်သော်လည်း ကံအကျိုးပေး မလှ၍ ထီးနန်းစည်းစိမ် မခံစားရသော အိမ်ရှေ့စံ မင်းသား နှစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ပိတောက်နွယ် မဂ္ဂဇင်း၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ။